सचेत बनौ म्रिगौला बचाउ ! - चारदिशा
January 28, 2015 चारदिशा बिबिध,यूरोप,समाज
तपाईं पक्कै मृगौलालाई बचाउन चाहनु हुन्छ त ? आजै देखी छोड्नुस् कसम खाएर यि गल्ती कार्यहरु !!!
१ पानी कम पिउने
अल्कोहल अर्थात जाँड रक्सीको अत्याधिक सेवनले पनि मृगौला समस्यामा पर्छ । यसले मृगौला फेल हुने अत्याधिक सम्भावना हुन्छ । यी १० कुरा सँधै ख्याल गर्नुस्